Nidaamyo caafimaad oo kala duwan | Samfunnskunnskap.no
Nidaamka dhakhtarka joogtada ah
Dhammaan dadweynuhu waxey xaq u leeyihiin inuu yeesho dhakhtar joogto ah. Dhakhtarkan ayuu qofku marka hore u tegayaa haddii uu xannuunsado. Dhakhtarka waxa ku waajib ah inuu dadkiisa caawiyo marka hore oo ka hor mariyo kuwa kale. Dhakhtarka joogtada ah ayaa bukaansocodka u sii gudbinaya adeega caafimaadka takhasuska ah.
Halkan waxa aad ka bedelan kartaa dhakhtarka joogtada ah, waxaanad ka helaysaa warbixin muhiimah oo ku saabsan caafimaadka: https://helsenorge.no
Dhakhtarka waxa saaran waajibka sir qarinta oo cid kale uma sheegi karo waxa dhakhtarka iyo bukaansocodku ay ka wada hadleen, haddii aanuu bukaansocodku oggolaanin.
Farmasiiyaasha waxay iibiyaan daawooyinka waxa kale oo ay bixiyaan talooyin dhinaca caafimaadka ah iyo daawooyinka sida loo isticmaalo. Daawooyinka badankooda waxa keli ah oo laga iibsan karaa farmasiiga. Daawooyinka qaar ka mid ah, sida tusaale ahaa kuwa fudud ee xanuunka dejiya waxa laga iibsan karaa dukaanada cuntada lagu iibiyo kaalimaha shidaalka. Qiimaha daawadu waxay ku xidhan tahay hadba farmasiiga ama dukaanka aad ka iibsatid.
Daawooyin badan ayaa leh waraaq ogolaansho gaar ah la rabo. Taa macnaheedu waxa weeye daawada ma iibsan kartid adiga oon marka hore dhakhtarkaaga la hadlin. Dhakhtarku waa inuu kuu qoraa waraaq ay ku taalo dawada nooceeda iyo sida loo isticmaalayo.
Daawooyinka rasiidhka buluuga ah
Haddii aad qabto xanuun halis ah oo u baahan in muddo dheer lagu daaweeyo, Xanuunkaas oo ah mid muddo dheer qaadanaya, waxaad heli kartaa dawooyin, nafaqo iyo maadooyinka kale ee aad u baahantayet oo warqad buluug ah ku qoran. Marka lagu siiyo daawadaa waraaqda buluuga ah ku qoran macnaheedu waxa weeye in aanad bixinin qiimaha dawda oo dhan. Waxaad bixinaysaa qeyb yar , inta badan ee qiimaha dawadana waxa bixinaysa dawladda.
Qaybta aad bixinayso dawada ee waraaqda buluuga ah iyo qeybtaada la kulanka dhakhtarku waxey ku tirsamayaan sidii aad u heli lahayd kaadh dawo oo bilaash ah.
Haddii ilmo ama qof dhallinyar u baahdo ilkaha in loo toosiyo, waa in waalidku ay bixiyaan qaybtooda hawshan.
Waa lacag la’aan haddii dhakhtarka lagu jiifanayo. Dhammaan kharashka ku baxa daaweyntaada, jiifiskaaga iyo cuntadaada waa lacag la’aan oo waxa bixinaysa dawladda.
AAdiga ayaa dooranaya dhakhtarka haddii dhigida hore loo sii qorsheeyay. Waqtiga daaweynta dhakhtarka la sugaa way kala duwantahey, waxa markaa habboon in aad eegto http://www.frittsykehusvalg.no/ oo ah meesha aad ka ogaan kartid waqtiga sugista isbitaal walba, si aad u dooratid isbitaalka ugu soo horeeya ee aad ka heli kartid seexin si laguu daaweeyo.
Waxa jira Norwey dhakhtaro tiro yar oo si gaar ah loo leeyahay. Haddii aad dooratid dhakhtaradan sida gaar ah loo leeyahay, adiga ayaa iska bixinaya kharashka ku baxa daawayntaada.
Daaweynta bukaan-socodka ee dhakhtarka
Daaweynta bukaan-socodka macnaheedu waa in isbitaalka lagugu daaweeyo iyada oo aan isbitaalka lagu jiifin. Waxa ballani kaaga imamnaysaa isbitaalka marka daaweyntu kuu dhammaatana waxaad ku laabanaysaa gurigaaga. Marka bukaan-socod ahaan laguu daaweeyo waxaad bixinaysaa qaybtaada sidii dhakhtarkaaga joogtada ah iyo dhakhtarka takhasuska ah oo kale.
Dhakhtar takhasus ah
Dhakhtarada takhasuska ahi tusaale ahaan waa sida dhakhtarka dumarka, dhakhtarka maqaarka, dhegaha, sanka iyo dhuunta ama dhakhtarka caruurta.
Marka aad rabtid inaad ballansatid dhakhaatiirta khaaska ah waa inaad marka hore qoraal gudbin ah ka haysatid dhakhtarkaaga gaarka ah ama dhakhtar kale. Haddii aanad qoraal gudbin ah ka haysan dhakhtarkaaga waa inaad bixisaa lacag dheeraad ah.
Haddii aad u baahato ambalaas (dhoolli), wax aad la hadli kartaa lanbarka gargaarka (113). Markaa waxa kula hadlaya xarunta ambalaaska. Waa muhiim in aad warbixin sax ah aad siiso:
(magaca, lanbarka telefoonka, halka aad ka soo hadleyso)
(immisa ayaa dhaawacmey, ma dhaawacyo halisaa jira iwm)
Cusbitaalka gargaarka degdeg ah
Haddii qof si kediso ah ugu baahdo gargaar caafimaad marka aanu shaqaynayn dhakhtarkaagu, waxa aad la xidhiidhi kartaa xarunta isbitaalka gargaarka degdega ah (116 117)
Dhammaan degmooyinka wadanka oo dhami waxey leeyihiin xarumo gargaarka degdega ah, dhakhtarada gargaarka degdega ah waxey furantahyihiin galabtii, habeenkii iyo maalmaha fasaxa ah, marka xafiisyada dhakhtaradu ay xidhanyihiin.
Marka qofku yimaado dhakhtarka gargaarka degdega, waxa qofku bixinayaa qaybtiisa lacagta daaweynta. Kharashka ku baxa agabka, tijaabooyinka iyo wixii la mid ah waa dheeraad.
Waa inaad ogaatid meesha uu dhakhtarkagargaarka degdega ah ee kuugu dhawi ku yaal!
Qaybta aad bixinayso (Egenandel)
Dawladu in badan ayey bixisaa qiimaha ku baxa in dhakhtar la la kulmo. Bukaanku waa in isagu uu bixiyaa qaybtiisa, dawladduna inta hadhay ayey bixinaysaa.
Waxa kale oo qaybtiisa u dheer bukaanku in bixiyo kharashka faashadaha, irbadaha, daawada, shaybaadhka iyo wixii la mid ah.
Carruurta ka yar 16 sanno ma bixinayaan qaybtooda. Kontoroolka uurku waa lacag la’aan.
Qaybtaada xagga dhakhtarkaagu waa caadi ahaan qiyaastii 150-300 oo karoon kulankiiba.
Kaadhka bilaashka (Frikort)
Marka aad bixiso qaybtaada xaddi lacageed oo cayiman sannad gudihii, waxa aad xaq u leedahay kaadh bilaash ah. Marka aad bixiso xaddiyadaa qaybahaaga ah, waxa si atomaatik ah laguugu soo dirayaa boostada kaadh bilaash ah oo ka imanaya maamulka-dhaqaalaha-caafimaadka (HELFO). Markaa waa in aad tustaa kaadhka marka aad la kulmayso dhakhtarka ama aad iibsanayso dawooyin ku qoran rasiidhka buluuga ah. Markaa ma bixinaysid qaybtaada inta sannadkaa ka hadhay. Macluumaad intaa ka badan eeg https://helsenorge.no/waxaad ka helaysaa liiska dhakhaatiirka. Halkan ayaad ka dooran kartaa dhakhtarkaaga.